၂၈။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် ယခုဘဝ၌ပင် ပင်ပန်းခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ပူလောင်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ဆင်းရဲစွာ နေရ၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေသည်မှ နောက်၌ မကောင်းသော လားရာ ဒုဂ္ဂတိဘဝသို့သာ မချွတ်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နှင့်နည်း? ဣနြေ္ဒတို့၌ ပိတ်ဆို့မထားသောတံခါးရှိသည်၏ အဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း စားဖွယ်ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်မသိသည်၏ အဖြစ်နှင့်လည်းကောင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် ယခုဘဝ၌ပင် ပင်ပန်းခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ပူလောင်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ဆင်းရဲစွာ နေရ၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေသည်မှ နောက်၌ မကောင်းသော လားရာ ဒုဂ္ဂတိဘဝသို့သာ မချွတ်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင် ရဟန်းသည် မျက်စိ နား နှာ လျှာကိုယ် စိတ်ဟူကုန်သော ဤဒွါရတို့ကို ပိတ်ဆို့မထား၊ စားဖွယ်ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို မသိ၊ ဣနြေ္ဒတို့၌ မစောင့်ရှောက်၊ ထိုရဟန်းသည် ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဟူသော ဆင်းရဲကိုရ၏။
ထိုသို့ သဘောရှိသော ရဟန်းသည် နေ့၌လည်းကောင်း၊ ညဉ့်၌လည်းကောင်းပူလောင်သော ကိုယ် ပူလောင်သော စိတ်ဖြင့် ဆင်းရဲစွာ နေရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
ဤအနက်သဘောကိုလည်း မြတ်စွာဘုရား ဟောအပ်၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်။
၂၉။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် ယခုဘဝ၌ပင် ပင်ပန်းခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ပူလောင်ခြင်းမရှိမူ၍ ချမ်းသာစွာ နေရ၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေသည်မှ နောက်၌ ကောင်းသော လားရာ သုဂတိဘဝသို့ မချွတ်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ အဘယ်တရားနှစ်ပါးတို့နှင့်နည်း? ဣနြေ္ဒတို့၌ ပိတ်ဆို့ထားသောတံခါးရှိသည်၏ အဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း စားဖွယ်ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိသည်၏ အဖြစ်နှင့်လည်းကောင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် ယခုဘဝ၌ပင် ပင်ပန်းခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ပူလောင်ခြင်းမရှိမူ၍ ချမ်းသာစွာ နေရ၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေသည်မှ နောက်၌ ကောင်းသော လားရာ သုဂတိဘဝသို့ မချွတ်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
အကြင် ရဟန်းသည် မျက်စိ နား နှာ လျှာကိုယ် စိတ်ဟူကုန်သော ဤဒွါရတို့ကို ကောင်းစွာပိတ်ဆို့ထား၏။ စားဖွယ်ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိ၏။ ဣနြေ္ဒတို့၌ စောင့်ရှောက်၏။ ထိုရဟန်းသည် ကိုယ်ချမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာဟူသော ချမ်းသာကိုရ၏။
ထိုသို့ သဘောရှိသော ရဟန်းသည် နေ့၌လည်းကောင်း ညဉ့်၌လည်းကောင်း မပူလောင်သော ကိုယ် မပူလောင်သော စိတ်ဖြင့် ချမ်းသာစွာ နေရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃ဝ။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ပူပန်စေတတ်သောတရားတို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နည်း- ရဟန်းတို့ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ကောင်းမှုကို မပြုသူ ကုသိုလ်ကို မပြုသူ သံသရာဘေးကို ကြောက်သူတို့၏ အစောင့်အရှောက်တရားကို မပြုသူ ဖြစ်၏။ ယုတ်မာမှုကို ပြုသူ ကြမ်းကြုတ်မှုကို ပြုသူ ခက်ထန်ရက်စက်မှုကို ပြုသူ ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ကောင်းမှုကို ငါမပြုလိုက်မိ’ဟူ၍လည်း ပူပန်၏။ မကောင်းမှုကို ငါ ပြုလိုက်မိ၏’ဟူ၍လည်း ပူပန်၏။ ရဟန်းတို့ ပူပန်စေတတ်သောတရားတို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို – ”ပညာမဲ့သူသည် ကာယဒုစရိုက် ဝစီဒုစရိုက် မနောဒုစရိုက်တို့ကို ပြုသောကြောင့်လည်းကောင်း (ရာဂစသော) အပြစ်နှင့်ယှဉ်သော အခြားအမှုကို ပြုသောကြောင့်လည်းကောင်း ကုသိုလ်ကံကို မပြုဘဲအကုသိုလ်ကံကိုသာ အကြိမ်များစွာ ပြုခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသောအခါ ငရဲသို့ ရောက်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၁။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ မပူပန်စေတတ်သောတရားတို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နည်း-ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ကောင်းမှုကို ပြုသူ ကုသိုလ်ကို ပြုသူ သံသရာဘေးကို ကြောက်သူတို့၏ အစောင့်အရှောက်တရားကို ပြုပြီးသူ ဖြစ်၏။ ယုတ်မာမှုကို မပြုသူ ကြမ်းကြုတ်မှုကို မပြုသူ ခက်ထန် ရက်စက်မှုကို မပြုသူ ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ”ကောင်းမှုကို ငါ ပြုလိုက်မိ၏”ဟူ၍လည်းမပူပန်၊ ”မကောင်းမှုကို ငါ မပြုလိုက်မိ”ဟူ၍လည်း မပူပန်၊ ရဟန်းတို့ မပူပန်စေတတ်သောတရားတို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ပညာရှိသူသည် ကာယဒုစရိုက် ဝစီဒုစရိုက် မနောဒုစရိုက်တို့ကို ပယ်စွန့်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ (ရာဂစသော) အပြစ်နှင့်ယှဉ်သော အခြားအမှုကို ပယ်စွန့်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်ကံကို မပြုဘဲ ကုသိုလ်ကံကိုသာ အကြိမ် များစွာ ပြုခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၂။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ ငရဲသို့ ကျရောက်ရ၏။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နှင့်နည်း- ယုတ်ညံ့သော သီလနှင့်လည်းကောင်း ယုတ်ညံ့သော အယူနှင့်လည်းကောင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ ငရဲသို့ ကျရောက်ရ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်သူသည် ယုတ်ညံ့သော သီလနှင့်လည်းကောင်း၊ ယုတ်ညံ့သော အယူနှင့်လည်းကောင်းဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံ၏။ ပညာမဲ့သော ထိုသူသည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသောအခါ ငရဲသို့ ကျရောက်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၃။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ရ၏။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နှင့်နည်း- ကောင်းမြတ်သော သီလနှင့်လည်းကောင်းကောင်းမြတ်သော အယူနှင့်လည်းကောင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝန်ထုပ်ကို ဆောင်ယူ၍ ချထားသကဲ့သို့ ဤအတူ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်သူသည် ကောင်းမြတ်သော သီလနှင့်လည်းကောင်း၊ ကောင်းမြတ်သော အယူနှင့်လည်းကောင်းဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံ၏။ ပညာရှိသော ထိုသူသည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၄။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လမရှိသူ မကောင်းမှုမှ မထိတ်လန့်တတ်သူရဟန်းသည် သစ္စာလေးပါးတရားကို သိခြင်းငှါ မထိုက်တန်၊ နိဗ္ဗာန်ရခြင်းငှါ မထိုက်တန်၊ အတုမရှိမြတ်၍ ယောဂ၏ကုန်ရာ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရခြင်းငှါ မထိုက်တန်၊ ရဟန်းတို့ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လရှိသူ မကောင်းမှုမှ ထိတ်လန့်တတ်သူ ရဟန်းသည် သစ္စာလေးပါးတရားကို သိခြင်းငှါ ထိုက်တန်၏။ နိဗ္ဗာန်ရခြင်းငှါ ထိုက်တန်၏။ အတုမရှိ မြတ်၍ ယောဂ၏ကုန်ရာ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရခြင်းငှါ ထိုက်တန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်ရဟန်းသည် ထိနမိဒ္ဓများသည်ဖြစ်၍ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လမရှိ၊ မကောင်းမှုမှမထိတ်လန့်တတ်၊ ပျင်းရိ၏။ ဝီရိယယုတ်လျော့၏။ မကောင်းမှုမှ မရှက်တတ်၊ အကျင့်၌ မရိုသေ၊ ထိုသို့ သော သဘောရှိသော ရဟန်းသည် မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို တွေ့ထိ သိမြင်ခြင်းငှါ မထိုက်တန်။
အကြင်ရဟန်းသည်ကား သတိရှိ၏။ ရင့်ကျက်သော ပညာရှိ၏။ သမထဝိပဿနာဖြင့် ရှုလေ့ရှိ၏။ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လရှိ၏။ မကောင်းမှုမှ ထိတ်လန့်တတ်၏။ မေ့လျော့မှုမရှိ၊ (ထိုရဟန်းသည် ) သံယောဇဉ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း အိုခြင်းကိုလည်းကောင်း ဖြတ်တောက်၍ဤဘဝ၌ပင် အတုမရှိ မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို တွေ့ထိသိရှိနိုင်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၅။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ လူအပေါင်းကိုအံ့သြစေရန် လူအပေါင်းက ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ဖိတ်ကြားစေရန့်လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောဟူသော အကျိုးအာနိသင်ရရှိရန် ဤမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးသည် မဟုတ်၊ ဤသို့ ကျင့်သုံးသဖြင့် ငါ့ကို လူအပေါင်းသည် သိစေသတည်းဟု နှလုံးသွင်း၍ဤမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးသည် မဟုတ်၊ ရဟန်းတို့ စင်စစ် (ကာယဒုစရိုက်စသည်မှ) စောင့်စည်းရန်လည်းကောင်း၊ (တဒင်္ဂပဟာန်စသည်ဖြင့်) ပယ်ရန်လည်းကောင်းဤမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံး၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ထောက်တည်ရာကမ်းသို့ ရောက်စေတတ်သော မျက် မှောက်မျက်ကွယ်ဘေးရန်မရှိသော မြတ်သောအကျင့်ကို (ကာယဒုစရိုက်စသည်မှ) စောင့်စည်းရန် တဒင်္ဂပဟာန်စသည်ဖြင့်ပယ်ရန် ထိုမြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။
ဤမဂ် (လမ်းစဉ်) ကို မြတ်သော စိတ်ဓာတ်ရှိကုန်သော ဘုရားအရိယာတို့သည် အစဉ်အတိုင်းကြွသွားတော်မူကုန်၏။ အကြင်အကြင်သူတို့သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူတိုင်းထိုမဂ် (လမ်းစဉ်)သို့ သွားရောက်ကြကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရား ဆုံးမသည့်အတိုင်း ပြုကျင့်ကုန်သော ထိုထိုသူတို့သည် ဆင်းရဲ၏ကုန်ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကုန်လတ္တံ့”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၆။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ လူအပေါင်းကိုအံ့သြစေရန် လူအပေါင်းက ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ဖိတ်ကြားစေရန်လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောဟူသော အကျိုးအာနိသင်ရရှိရန် ဤမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးသည် မဟုတ်၊ ဤသို့ ကျင့်သုံးသဖြင့် ငါ့ကို လူအပေါင်းသည် သိစေသတည်းဟု နှလုံးသွင်း၍ဤမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံးသည် မဟုတ်။ ရဟန်းတို့ စင်စစ် ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိရန်ပိုင်းခြားသိရန် ဤမြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သုံး၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ထောက်တည်ရာကမ်းသို့ ရောက်စေတတ်သော မျက် မှောက်မျက်ကွယ်ဘေးရန်မရှိသော မြတ်သောအကျင့်ကို ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိရန်လည်းကောင်း၊ ပိုင်းခြားသိရန်လည်းကောင်း ထိုမြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။
ဤမဂ် (လမ်းစဉ်) ကို မြတ်သော စိတ်ဓာတ်ရှိကုန်သော ဘုရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အစဉ်အတိုင်းကြွသွားတော်မူကုန်၏။ အကြင်အကြင်သူတို့သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူတိုင်းထိုမဂ် (လမ်းစဉ်)သို့ သွားရောက်ကြကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရား ဆုံးမသည့်အတိုင်း ပြုကျင့်ကုန်သော ထိုထိုသူတို့သည် ဆင်းရဲ၏ကုန်ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကုန်လတ္တံ့”ဟု ဤဂါထာဖြင့်ဆိုအပ်၏။
၃၇။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော့်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် ယခုဘဝ၌ပင်လျှင်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း များလျက် နေရ၏။ ထိုရဟန်းသည် အာသဝေါတရားတို့ကုန်ခြင်း၏အကြောင်းကိုအားထုတ်အပ်သည် ဖြစ်၏။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နှင့်နည်း- သံဝေဂဖြစ်စေတတ်သော အရာတို့၌ သံဝေဂဖြစ်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ သံဝေဂဖြစ်သူအား အကြောင်းအားလျော်စွာအားထုတ်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ဤတရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် ယခုဘဝ၌ပင်လျှင်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်း စိတ်ချမ်းသာခြင်းများလျက် နေရ၏။ ထိုရဟန်းသည် အာသဝေါတရားတို့ကုန်ခြင်း၏အကြောင်းကိုအား ထုတ်အပ်သည် ဖြစ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက် သဘောကို –
”ပညာရှိသော ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သည့် လုံ့လရှိသော ရင့်ကျက်သော ပညာရှိသော ရဟန်းသည် သံဝေဂဖြစ်စေတတ်သော အရာတို့၌ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်၍ သံဝေဂ ဖြစ်သည်သာတည်း။
ဤသို့ ပြင်းထန်သော လုံ့လရှိလျက် မတုန်မလှုပ်မူ၍ ငြိမ်သက်စွာဖြစ်ခြင်းရှိသော စိတ်၏တည်ကြည်မှုကိုအားထုတ်၍ နေလေ့ရှိသော ရဟန်းသည် ဆင်းရဲ၏ကုန်ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၈။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌ ခေမဝိတက် ပဝိဝေကဝိတက်ဟူသော ဝိတက် (အကြံ) နှစ်ပါးတို့သည် အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့မြတ်စွာဘုရားသည် ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာ ရှိ၏။ ဆင်းရဲမရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်၏။ ရဟန်းတို့ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိသော ဆင်းရဲ မရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်သော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ဉာဏ်တော်၌ ”ဤအမူအရာဖြင့် ကိလေသာရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာမရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ငါသည် မဆင်းရဲစေလို”ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင်အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ မြတ်စွာဘုရားသည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာ ရှိ၏။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်၏။ ရဟန်းတို့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိသော ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်သော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌ ”အကုသိုလ်ကို ပယ်အပ်၏”ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင် အကြိမ်များစွာအဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည်လည်း ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကြကုန်သည် ဆင်းရဲမရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့၊ ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲမရှိခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် ဆင်းရဲမရှိခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်သော သင်တို့အား ငါတို့သည် ဤအမူအရာဖြင့် ကိလေသာရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာမရှိသော သတ္တဝါကိုလည်းကောင့်းတစ်စုံ တစ်ယောက်ကိုမျှ မဆင်းရဲစေကုန်အံ့”ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင် အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့်မပြတ် ဖြစ်လတ္တံ့။
ရဟန်းတို့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြကုန်လော့၊ ရဟန်းတို့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်သော သင်တို့အား ”အကုသိုလ်မည်သည် အဘယ်နည်း? အဘယ်ကို မပယ်အပ်သနည်း? အဘယ်ကို ပယ်စွန့်ရကုန်အံ့နည်း”ဟု ဤဝိတက်သည်ပင်လျှင် အကြိမ်များစွာ အဆင့်ဆင့်မပြတ်ဖြစ်လတ္တံ့ဟု ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ရွက်ဆောင်နိုင်ခဲသော ဘုရားကိစ္စကို ရွက်ဆောင်တတ်သော သစ္စာလေးပါးကို သိတော်မူသော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌ ထိုနှစ်ပါးသော ကြံစည်မှု ‘ဝိတက်’တို့သည် အဆင့်ဆင့်မပြတ်ဖြစ်ကုန်၏။ ဘေးမရှိသော ကြံစည်မှု ‘ခေမ ဝိတက်’ကို ရှေးဦးစွာ ဆိုအပ်၏။ ထို့နောက်နှစ်ခုမြောက် ဆိတ်ငြိမ်သော ကြံစည်မှု ‘ပဝိဝေကဝိတက်’ကို ပြအပ်၏။
အမိုက်တိုက်ကို ပယ်လွှင့်တတ်သော နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်သော ဂုဏ်ကျေးဇူးအထူးကို ရှာမှီးတတ်သော ရောက်သင့်သည့် အရဟတ္တ ဖိုလ်သို့ ရောက်ပြီးသော ဝသီဘော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အာသဝေါကင်းသော သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲကို ကူးမြောက်ပြီးသောတဏှာ၏ကုန်ရာ (အရဟတ္တဖိုလ်နိဗ္ဗာန်)၌ ကင်းလွတ်သော အဆုံးဖြစ်သော ကိုယ်ကို ဆောင်သော ကိလေသာမာရ်ကို စွန့်ပြီးသော အိုခြင်း၏ တစ်ဖက်ကမ်း (နိဗ္ဗာန်)သို့ ရောက်သော ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ဉာဏ်တော်၌ (ဝိတက်နှစ်ပါးတို့သည်) အဆင့်ဆင့် မပြတ်ဖြစ်ကုန်၏။
ကျောက်တောင်ထိပ်၌ ရပ်တည်လျက်ရှိသော ယောက်ျားသည် ထက်ဝန်းကျင် လူအပေါင်းကို ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ ထို့အတူ ကောင်းမြတ်သော ပညာရှင် ဖြစ်တော်မူသော ထက်ဝန်းကျင်မြင်နိုင်စွမ်းသောဉာဏ်မျက်စိရှိတော်မူသော စိုးရိမ်ပူဆွေး ကင်းဝေးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ပညာ (ဓမ္မ) ဖြင့်ပြီးသော ပြာသာဒ်ထက်သို့ တက်တော်မူ၍ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း အိုခြင်းတို့ နှိပ်စက်အပ်သဖြင့်စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းသို့ သက်ဆင်းကျရောက်နေသော သတ္တဝါအပေါင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၃၉။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မဖောက်မပြန် (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ တရားဟောခြင်းနှစ်ပါးတို့သည် အကြောင်းအားဖြင့် ဖြစ်ကုန်၏။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နည်း- မကောင်းမှုကို မကောင်းမှုအားဖြင့် ကြည့်ရှုကြလော့၊ ဤသည်ကား ပဌမဖြစ်သောတရားဟောခြင်းတည်း။ မကောင်းမှုကို မကောင်းမှုအားဖြင့် မြင်၍ ထိုမကောင်းမှု၌ ငြီးငွေ့ကြကုန်လော့၊ တပ်ခြင်း ကင်းကြကုန်လော့၊ ကင်းလွတ်ကြကုန်လော့၊ ဤသည်ကား ဒုတိယဖြစ်သောတရား ဟောခြင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ တရားဟောခြင်းနှစ်ပါးတို့သည် အကြောင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကုန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”သတ္တဝါအားလုံးကို စောင့်ရှောက်တော်မူသော သစ္စာလေးပါးကို သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ အကြောင်းအားဖြင့် ဟောတော်မူအပ်သော ဒေသနာကို ဉာဏ်ဖြင့် ရှုပါလော့၊ (မြတ်စွာဘုရားသည် ) တရားနှစ်ပါးတို့ကိုလည်းကောင်းစွာ ပြတော်မူ အပ်ကုန်၏။
ထိုမကောင်းမှုကို ဉာဏ်ဖြင့် ရှုကြကုန်လော့၊ ထိုမကောင်းမှု၌လည်း တပ်ခြင်း ကင်းကြကုန်လော့၊ ထိုတပ်မှုကင်းခြင်းကြောင့် မကောင်းမှု၌ တပ်ခြင်းကင်းသော စိတ်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ဆင်းရဲ၏ဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုကြကုန်လတ္တံ့”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄ဝ။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ အဝိဇ္ဇာ ‘မောဟ’သည် အကုသိုလ်တရားတို့ ဖြစ်ခြင်း၏ ရှေ့သွားဖြစ်၏။ အရှက်မရှိမှု ‘အဟိရိက’ မထိတ်လန့်မှု ‘အနောတ္တပ္ပ’သည် နောက်လိုက်တရားသာ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ဝိဇ္ဇာ ‘အမောဟ’သည် ကုသိုလ်တရားတို့ ဖြစ်ခြင်း၏ ရှေ့သွားဖြစ်၏။ ရှက်မှု ‘ဟိရီ’ ထိတ်လန့်မှု ‘သြတ္တပ္ပ’သည် နောက်လိုက်တရားသာ ဖြစ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ဤလူ့ပြည် လောက၌လည်းကောင်း၊ တစ်ပါးသော လောက၌လည်းကောင်း ဒုဂ္ဂတိဟူသမျှအားလုံးတို့သည် အဝိဇ္ဇာ’မောဟ’လျှင် အကြောင်းရင်း ရှိကုန်၏။ မရသေးသော အာရုံကိုလိုချင်မှု ‘ဣစ္ဆာ’နှင့် ရပြီးအာရုံကို တပ်မက်မှု ‘လောဘ’တို့ဖြင့် ပွါးစီးကုန်၏။
အကြင်အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့် ယုတ်မာသော အလိုရှိသူ အရှက်မရှိသူ ရိုသေမှုမရှိသူဖြစ်ရ၏။ ထိုအဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့် မကောင်းမှု ပွါးများ၏။ ထိုမကောင်းမှုဖြင့် အပါယ်သို့ လားရောက်ရ၏။
ထို့ကြောင့် ရဟန်းသည် အလို ‘ဆန္ဒ’ကိုလည်းကောင်း၊ လောဘကိုလည်းကောင်း၊ အဝိဇ္ဇာကိုလည်းကောင်း ပယ်စွန့်ကာ ဝိဇ္ဇာ ‘အမောဟ’ကို ဖြစ်စေလျက် အလုံးစုံသော ဒုက္ခ၏တည်ရာလားရာ ‘ဂတိ’ ငါးရပ်တို့ကို ပယ်စွန့်နိုင်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၁။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ စင်ကြယ်သော ဝိပဿနာပညာ မဂ်ပညာမှ ဆုတ်ယုတ်သော သတ္တဝါတို့သည် (သမ္ပတ္တိအားလုံးတို့မှ) အလွန့်အလွန် ဆုတ်ယုတ်သော သတ္တဝါတို့ မည်ကုန်၏။ ထိုသတ္တဝါတို့သည် ယခုဘဝ၌ပင် ပင်ပန်းခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ပူလောင်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ဆင်းရဲစွာ နေရကုန်၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍သေသည်မှနောက်၌ မကောင်းသော လားရာ ဒုဂ္ဂတိဘဝသို့ မချွတ်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ရဟန်းတို့ စင်ကြယ်သော ဝိပဿနာပညာ မဂ်ပညာမှ မဆုတ်ယုတ်ကုန်သော သတ္တဝါတို့သည် (သမ္ပတ္တိအားလုံးတို့မှ) မဆုတ်ယုတ်သော သတ္တဝါတို့ မည်ကုန်၏။ ထိုသတ္တဝါတို့သည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင့် ပင်ပန်းခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲ ချမ်းသာစွာ နေရကုန်၏။ ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီး၍သေသည်မှနောက်၌ ကောင်းသော လားရာ ‘သုဂတိ’ ဘဝသို့ မချွတ်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”နတ်နှင့်တကွသော လောကကို ကြည့်ရှုလော့၊ ပညာမှ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်၌ အမှားနှလုံးသွင်းသည် ဖြစ်ရကား ဤသည်သာမှန်၏ဟု အောက်မေ့မှတ် ထင်၏။
မှန်၏။ အကြင်ပညာသည် ဖောက်ထွင်း၍ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေတတ်၏။ အကြင်ပညာဖြင့်ဇာတိဘဝ၏ကုန်ခြင်းကို ကောင်းစွာသိ၏။ ထိုပညာသည်သာ လောက၌ အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။
သတိရှိတော်မူကုန်သော ရွှင်သော ပညာရှိကုန်သော အဆုံးဖြစ်သော ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆောင်ကုန်သော ထိုသစ္စာလေးပါးကို သိကုန်သော ဘုရားရဟန္တာတို့အား နတ်လူတို့သည် ချစ်မြတ်နိုးကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၂။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဖြူစင်သော ဤတရားနှစ်ပါးတို့သည် လောကကို စောင့်ရှောက်ကုန်၏။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နည်း- မကောင်းမှုမှ ရှက်မှု ‘ဟိရီ’လည်းကောင်း မကောင်းမှုမှ ကြောက်လန့်မှု ‘သြတ္တပ္ပ’လည်းကောင်းတည်း။ ရဟန်းတို့ ဖြူစင်သော ဤတရားနှစ်ပါးတို့သည် လောကကို မစောင့်ရှောက်ကုန်မူဤလောက၌ ”အမိ”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”မိကြီး မိထွေး”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”ဦးလေးဦးကြီး၏ မယား”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”ဆရာ၏ မယား”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”အလေးပြုထိုက်သူတို့၏ မယား”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း မထင်နိုင်ရာ၊ လူ့လောကကြီးသည် ဆိတ်နှင့်သိုး ကြက် ဝက် ခွေး မြေခွေးတို့ကဲ့သို့ ရောနှောပျက်စီးခြင်သို့ ရောက်ရ၏။ အကြင့်ကြောင့် ဖြူစင်သော ဤတရားနှစ်ပါးတို့သည် လောကကို စောင့်ရှောက်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ”အမိ”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”မိကြီး မိထွေး”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”ဦးလေး ဦးကြီး၏ မယား”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”ဆရာ၏ မယား”ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ”အလေးပြုထိုက်သူတို့၏ မယား”ဟူ၍သော်လည်းကောင်းထင်ရှား၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်သူတို့အား အရှက်အကြောက်သည် အခါ ခပ်သိမ်း မရှိ၊ ထိုသူတို့သည် ဖြူစင်သောတရားမှသက်လျှောသောကြောင့် (အဖန်ဖန်) ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သေခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။
အကြင်သူတို့အား အရှက်အကြောက်သည် အမြဲထင်၏။ မြတ်သောအကျင့် ပြန့် ပွါး၍ကိလေသာငြိမ်းကုန်သော ထိုသူတို့သည် တစ်ဖန်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှကုန်ပြီးသူတို့ ဖြစ်ကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၃။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်- ရဟန်းတို့ ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသော ထင်ရှားဖြစ်နေမှုမရှိသော ပြုလုပ်ထားမှုမရှိသော စီရင်ထားမှုမရှိသော နိဗ္ဗာန်သည် ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသော ထင်ရှားဖြစ်နေမှုမရှိသော ပြုလုပ်ထားမှုမရှိသော စီရင်ထားမှုမရှိသော ဤနိဗ္ဗာန်သည် အကယ်၍ မရှိပါမူ ဤလောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာမှု ထင်ရှားဖြစ်နေမှုပြုလုပ်ထားမှု စီရင်ထားမှုဟူသော ခန္ဓာပဉ္စကမှ ထွက်မြောက်ရာသည် မထင်ရှားရာ။ ရဟန်းတို့ အကြင့်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသော ထင်ရှားဖြစ်နေမှု မရှိသော ပြုလုပ်ထားမှုမရှိသော စီရင်ထားမှုမရှိသော နိဗ္ဗာန်သည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် သာ ဖြစ်ပေါ်လာမှု ထင်ရှားဖြစ်နေမှု ပြုလုပ်ထားမှု စီရင်ထားမှုဖြစ်သော ခန္ဓာပဉ္စကမှ ထွက်မြောက်ရာသည် ထင်ရှား၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ဖြစ်ပေါ်နေသော ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေသော ကောင်းစွာ ဖြစ်သော ပြုလုပ်ထားသော စီရင်ထားမှုရှိသော မမြဲသော အိုခြင်း သေခြင်းတို့နှင့် ရောစပ်နေသော ရောဂါအပေါင်းတို့၏ (တည်နေရာ) အသိုက်သဖွယ်ဖြစ်သော ပျက်စီးခြင်းရှိသော အာဟာရနှင့် တဏှာလျှင် ဖြစ်ကြောင်း အမွန်အစရှိသော ထိုခန္ဓာငါးပါးကို နှစ်သက်ခြင်းငှါ မသင့်၊ ထိုခန္ဓာငါးပါး (သက္ကာယ) ၏ ထွက်မြောက်ရာဖြစ်သော (ကိလေသာ သင်္ခါရတို့၏) ငြိမ်းအေးရာဖြစ်သော ကြံစည်မှု တက္ကဉာဏ်၏ အာရုံမဟုတ်သော ခိုင်မြဲသော ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသော ကောင်းစွာ မဖြစ်သော စိုးရိမ်မှုကင်းသော ကိလေသာမြူကင်းသော သံသရာဆင်းရဲနှိပ်စက်ခံရသူတို့ ကျင့်အပ်သော ဆင်းရဲ တရားတို့၏ ချုပ်ရာဖြစ်သော သင်္ခါရတို့၏ ငြိမ်းရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည် ချမ်းသာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၄။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ နိဗ္ဗာနဓာတ်တို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ အဘယ်နှစ်ပါးတို့နည်းဟူမူ- ခန္ဓာငါးပါးအကြွင်းရှိသော ‘သဥပါဒိသေသ’ နိဗ္ဗာနဓာတ် ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းမရှိသော ‘အနုပါဒိသေသ’ နိဗ္ဗာနဓာတ်တို့တည်း။
ရဟန်းတို့ ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းရှိသော ‘သဥပါဒိသေသ’ နိဗ္ဗာနဓာတ်ဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်သူ အာသဝေါကုန်ခန်းသူ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးသူ ပြုအပ်ပြီးသော (မဂ်) ကိစ္စရှိသူ ခန္ဓာဝန်ကို ချပြီးဖြစ်သူ မိမိအကျိုး (အရဟတ္တဖိုလ်)သို့ ရောက်ပြီးသူ ဘဝသံယောဇဉ်ကုန်ခန်းပြီးသူ ကောင်းစွာသိ၍ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်သူ ဖြစ်၏။ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား (နောက်ဆုံးဘဝ၏ အကြောင်းကံ မကုန်သေးသမျှ) ဣနြေ္ဒငါးပါးတို့သည် တည်ရှိကုန်သည်သာလျှင် တည်း။ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ယင်းဣနြေ္ဒငါးပါးတို့၏ (အနုပ္ပါဒနိရောဓ၏ အစွမ်းဖြင့်) မချုပ်ကုန်သောကြောင့် ပင် နှစ်သက်ဖွယ် မနှစ်သက်ဖွယ် အာရုံကို ခံစား၏။ ချမ်းသာဆင်းရဲကို ခံစား၏။ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား အကြင်ရာဂကုန်ခန်းမှု ဒေါသကုန်ခန်းမှု မောဟကုန်ခန်းမှုသည် ရှိ၏။ ဤရာဂဒေါသမောဟကုန်ခန်းမှုကိုပင် ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းရှိသော ‘သဥပါဒိသေသ’ နိဗ္ဗာနဓာတ်ဟု ဆိုအပ်၏။
ရဟန်းတို့ ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းမရှိသော ‘အနုပါဒိသေသ’ နိဗ္ဗာနဓာတ်ဟူသည် အဘယ်နည်း? ရဟန်းတို့ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်သူ အာသဝေါကုန်ခန်းသူ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးသူ ပြုအပ်ပြီးသော (မဂ်) ကိစ္စရှိသူ ခန္ဓာဝန်ကို ချပြီးဖြစ်သူ မိမိအကျိုး (အရဟတ္တဖိုလ်)သို့ ရောက်ပြီးသူ ဘဝသံယောဇဉ်ကုန်ခန်းပြီးသူ ကောင်းစွာသိ၍ (ကိလေသာမှ) လွတ်မြောက်ပြီးသူ ဖြစ်၏။့ ဤအတ္တဘော၌ပင် ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား ခံစားမှု ‘ဝေဒနာ’အားလုံးတို့သည် ရာဂစသည်တို့ဖြင့် မနှစ်သက်အပ်ကုန်မူ၍ တစ်ဖန် မဖြစ်သောအားဖြင့် ငြိမ်းအေးကုန်လတ္တံ့။ ရဟန်းတို့ ဤခံစားမှုဟူသမျှတို့၏တစ်ဖန် မဖြစ်သောအားဖြင့် ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုပင် ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းမရှိသော ‘အနုပါဒိသေသ’ နိဗ္ဗာနဓာတ်ဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့ နိဗ္ဗာနဓာတ်တို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”တဏှာဒိဋ္ဌိအစွမ်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုသောတရားကို မမှီသောတာဒိဂုဏ်ရှင် ဖြစ် တော်မူသော စက္ခုငါးပါးရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤနှစ်ပါးသော နိဗ္ဗာနဓာတ်တို့ကို ပြတော်မူအပ်ကုန်၏။မှန်၏-တစ်မျိုးသော (သဥပါဒိသေသ) နိဗ္ဗာနဓာတ်သည် ဤမျက်မှောက်အတ္တဘော၌ ဖြစ်၏။ ခန္ဓာငါးပါးကြွင်းကျန်၏။ ဘဝတဏှာကုန်ခန်း၏။ ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းမရှိသော ‘အနုပါဒိသေသ’နိဗ္ဗာနဓာတ်သည်ကား ခန္ဓာပျက်ပြီးသောအခါ၌ ဖြစ်၏။ ယင်းနိဗ္ဗာနဓာတ်၌ အလုံးစုံအားဖြင့်ဘဝတို့သည် ချုပ်ကုန်၏။
အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပြုပြင်ခြင်းကင်းသော ထိုနိဗ္ဗာန်ကို သိ၍ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သော စိတ်ရှိကုန်၏။ ဘဝတဏှာကုန်ခန်းကုန်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တရားအနှစ်ကို ရသောကြောင့် ရာဂစသည်ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်၌ မွေ့လျော်ကုန်၏။ တာဒိဂုဏ်ရှင် ထိုဘုရားသခင်တို့သည် အလုံးစုံသော ဘဝတို့ကို ပယ်စွန့်ကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆို အပ်၏။
၄၅။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ တစ်ယောက်တည်း ကိန်းအောင်းခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သည် တစ်ယောက်တည်းကိန်းအောင်းရခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သည် အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ စိတ်၏ငြိမ်းအေးခြင်းကိုအားထုတ်ကြကုန်သည် မပျက်စီးသော ဈာန်ရှိကြကုန်သည် ဝိပဿနာနှင့် ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်တို့ကို ပွါးစေကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့၊ ရဟန်းတို့ တစ်ယောက်တည်းကိန်းအောင်းခြင်းလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်သောတစ်ယောက်တည်း ကိန်းအောင်းရခြင်း၌ မွေ့လျော်ကုန်သော အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ စိတ်၏ငြိမ်းအေးခြင်းကိုအားထုတ်ကြကုန်သော မပျက်စီးသော ဈာန်ရှိကုန်သော ဝိပဿနာနှင့် ပြည့်စုံကြကုန်သော ဆိတ်ငြိမ်ရာ အရပ်တို့ကို ပွါးစေကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား အရဟတ္တဖိုလ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာအကြွင်းရှိသေးမူအနာဂါမိဖိုလ်ကိုလည်းကောင်း ဤနှစ်ပါးသော ဖိုလ်တို့တွင် တစ်ပါးပါးသော ဖိုလ်ကို ဤဘဝ၌ပင် မချွတ်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ငြိမ်းအေးသော စိတ် ရင့်ကျက်သော ပညာ သတိရှိကုန်လျက်သာလျှင် သမထဝိပဿနာနှစ်ပါးဖြင့် ရှုလေ့ရှိကုန်သည် ကာမတို့၌ ငဲ့ကွက်ခြင်း ကင်းကုန်သည်ဖြစ်၍ခန္ဓာငါးပါးတရားကို အသင့်အားဖြင့် ရှုကုန်၏။
မမေ့မလျော့မှု ‘အပ္ပမာဒ’ တရား၌ မွေ့လျော်ကုန်သော မေ့လျော့မှု ‘ပမာဒ’ တရား၌ ဘေးဟု ရှုကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းငှါ မထိုက်ကုန် နိဗ္ဗာန်နှင့်သာလျှင် နီးကုန်၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၆။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ သိက္ခာဟူသော အကျိုးရှိကုန်သည် ပညာလွန်ကဲကုန်သည် အရဟတ္တဖိုလ်ဟူသော အနှစ်ရှိကုန်သည် သတိဟူသော အကြီးအမှူးရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့၊ ရဟန်းတို့သိက္ခာဟူသော အကျိုးရှိကုန်သည် ပညာလွန်ကဲကုန်သည် အရဟတ္တဖိုလ်ဟူသော အနှစ်ရှိကုန်သည်သတိဟူသော အကြီး အမှူးရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်သောသူတို့အားအရဟတ္တဖိုလ်ကိုလည်းကောင်း ကိလေသာ အကြွင်း ရှိသေးမူ အနာဂါမိဖိုလ်ကိုလည်းကောင်းဤနှစ်ပါးသော ဖိုလ်တို့တွင် တစ်ပါးပါးသော ဖိုလ်ကို ဤဘဝ၌ပင် မချွတ်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”ပြည့်စုံသောအကျင့်ရှိသော မပျက်သောတရားရှိသော ထူးကဲသော ပညာရှိသော ဇာတိကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်လေ့ရှိသော အဆုံးဖြစ်သော အတ္တဘောကို ဆောင်သော ကိလေသာမာရ်ကို စွန့်သော ထိုရဟန်းကို ဇရာ၏ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်သူဟု ငါ ဟောတော်မူ၏။
ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် (သင်တို့သည်) အခါ ခပ်သိမ်း နှစ်မျိုးသော ဈာန်၌ မွေ့လျော်ကြသူတည်ကြည်ကြသူ ပြင်းစွာအားထုတ်သော လုံ့လရှိကြသူ ဇာတိကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို ဉာဏ်ဖြင့် ရှုကြသူစစ်သည်နှင့် တကွသော မာရ်ကို လွှမ်းမိုး၍ ပဋိသန္ဓေ နေမှု သေမှု၏ တစ်ဖက်ကမ်း (နိဗ္ဗာန်သို့) ရောက်ကြရသူတို့သည် ဖြစ်ကြကုန်လော့”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၇။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် နိုးကြားမှုနှင့်ယှဉ်သူ အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’ ရှိသူတည်ကြည်မှု ‘သမာဓိ’ ရှိသူ ဝမ်းမြောက်မှုများသူ ကောင်းစွာ ကြည်လင်သူ ဖြစ်၍လည်း နေရာ၏။ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ရာဝယ် ကုသိုလ်တရားတို့၌ အခါအားလျော်စွာ အထူးရှုလျက်လည်း နေရာ၏။ ရဟန်းတို့ နိုးကြားမှုနှင့်ယှဉ်သူ အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’ ရှိသူတည်ကြည်မှု ‘သမာဓိ’ ရှိသူ ဝမ်းမြောက်မှုများသူ ကောင်းစွာ ကြည်လင်သူ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ရာဝယ် ကုသိုလ်တရားတို့၌ အခါအားလျော်စွာ အထူးရှုလျက်နေသူ ရဟန်းအားအရဟတ္တဖိုလ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိလေသာအကြွင်းရှိ သေးမူ အနာဂါမိဖိုလ်ကိုလည်းကောင်းဤနှစ်ပါးသော ဖိုလ်တို့တွင် တစ်ပါးပါးသော ဖိုလ်ကို ယခုဘဝ၌ပင် မချွတ်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”နိုးကြားကြကုန်သော သင်တို့သည် ဤငါ၏ စကားကို နာကြကုန်လော့၊ အိပ်ပျော်နေကြကုန်သော သင်တို့သည် နိုးကြားကြကုန်လော့၊ အိပ်ပျော်ခြင်းထက် နိုးကြားခြင်းသည် မြတ်၏။ နိုးကြားသောသူအားဘေးမရှိ။
အကြင်သူသည် နိုးလည်းနိုးကြား၏။ အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’လည်း ရှိ၏။ တည်ကြည်မှု ‘သမာဓိ’လည်း ရှိ၏။ ဝမ်းမြောက်မှုများ၍ ကြည်လင်သော စိတ်လည်း ရှိ၏။ ထိုသူသည် အခါအားလျော်စွာ အသင့်အားဖြင့် တရားကို စူးစမ်းရှာဖွေလျက်ငြိမ်သက်တည်ကြည်သည့်အဖြစ်သို့ ရောက်ကာ အဝိဇ္ဇာဟူသော အမိုက်တိုက်ကို ပယ်ဖျောက်နိုင်ရာ၏။
ထို့ကြောင့် ဤလောက၌ နိုးကြားသူကိုသာ ဆည်းကပ်ရာ၏။ ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လရှိသော ရင့်ကျက်သော ပညာရှိသော ဈာန်ရသော ရဟန်းသည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်းအိုခြင်း၏ (အကြောင်း) သံယောဇဉ်ကို ဖြတ်တောက်၍ ဤဘဝ၌ပင် အတုမရှိမြတ်သော အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်သို့ ရောက်ရာ၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၈။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ ဤဆိုလတ္တံ့သော အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကို မပယ်နိုင်၍ အပါယ်၌ ဖြစ်ရမည့် ငရဲ၌ ဖြစ်ရ မည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤနှစ်ယောက်တို့တည်း။ အဘယ်နှစ်ယောက်တို့နည်း- အကြင်သူသည်ကား မြတ်သောအကျင့်ကို မကျင့်ဘဲလျက် မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်၏ဟု ဝန်ခံ၏။ အကြင်သူသည်ကား ထက်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံ၍ ဖြူစင်သော မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူကို အခြေအမြစ်မရှိသော မမြတ်သောအကျင့်ဖြင့် စွပ်စွဲနှိပ်စက် ဖျက်ဆီး၏။ ရဟန်းတို့ ဤယုတ်မာသောတရားတို့ကို မပယ်နိုင်၍ အပါယ်၌ ဖြစ်ရမည့်ငရဲ၌ ဖြစ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤနှစ်ယောက်တို့တည်း။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက် သဘောကို –
”မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုသောသူသည်လည်း ငရဲသို့ ရောက်ရ၏။ (မိမိ) ပြုလုပ်လျက် မပြုမလုပ်ဟု ပြောဆိုသောသူသည်လည်း ငရဲသို့ ရောက်ရ၏။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်လည်း ယုတ်သော အမှုရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ နောင်တမလွန်ဘဝ၌ ငရဲခံရခြင်း တူကုန်၏။
ယုတ်မာသော သဘောရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ (ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကို) မစောင့်စည်းကုန်သော သင်္ကန်းကို လည်ပင်း၌ ပတ်ကြကုန်သော များစွာသော ထိုသူယုတ်မာတို့သည် ယုတ်မာသော မကောင်းမှုတို့ကြောင့် ငရဲသို့ ကျရောက်ရကုန်၏။
သီလလည်းမရှိ၊ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုလည်း မစောင့်စည်းဘဲ တိုင်းသူပြည် သားတို့သဒ္ဓါကြည်ဖြူပေးလှူအပ်သော ဆွမ်းကို စားရခြင်းထက် မီးလျှံကဲ့သို့ ပူလောင်သော သံတွေခဲကို စားရခြင်းက သာ၍ ကောင်းမြတ်သေး၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၄၉။ ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏။ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်-
ရဟန်းတို့ နှစ်ပါးသော ဒိဋ္ဌိအယူတို့ဖြင့် နှိပ်စက်ခံရသော နတ်လူအချို့တို့သည် တွန့်တိုဆုတ်နစ်ကုန်၏။ အချို့တို့သည်ကား လွန်၍ ပြေးသွားကုန်၏။ စက္ခုအမြင်ရှိသူတို့သည်ကား မဇ္ဈိမပဋိပဒါဖြင့် မျက့်မှောက်ပြုနိုင်ကုန်၏။
ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် အချို့သူတို့သည် တွန့်တိုဆုတ်နစ်ကုန်သနည်း? ရဟန်းတို့ နတ်လူတို့သည် ဘဝလျှင် မွေ့လျော်ရာ ရှိကုန်၏။ ဘဝ၌ မွေ့လျော်တတ်ကုန်၏။ ဘဝ၌ နှစ်သက်တတ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့အား ဘဝချုပ်ရန်အတွက် တရားဟောပြောသည်ရှိသော် စိတ်သည် မသက်ဝင် မကြည်လင် ကောင်းစွာ မတည် နှလုံးမသွင်း၊ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် အချို့သူတို့သည် တွန့်တိုဆုတ်နစ်ကုန်၏။
ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် အချို့သူတို့သည် လွန်၍ ပြေးသွားကုန်သနည်း? အချို့သူတို့သည် ဘဝဖြင့်ပင် ငြီးငွေ့ကုန် ဘဝမှ ရှက်နိုးကုန် ဘဝ၌ စက်ဆုပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ဘဝကင်းပြတ်ခြင်းကို နှစ်သက်ကုန်၏။ အချင်းတို့ အကြင့်ကြောင့် ဤအတ္တသည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေသည်မှ နောက်၌ ပြတ်၏။ ပျက်စီး၏။ သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်တော့၊ ဤတရားသည် ငြိမ်း၏။ ဤတရားသည် မြတ်၏။ ဤတရားသည် မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သော သဘော ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် အချို့သူတို့သည် လွန်၍ ပြေးသွားကုန်၏။
ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် စက္ခုအမြင်ရှိသောသူတို့သည် မဇ္ဈိမပဋိပဒါဖြင့် မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကုန်သနည်း? ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ဟုတ်မှန်သော ခန္ဓာငါးပါးကိုဟုတ်မှန်သောအားဖြင့် မြင်၏။ဟုတ်မှန်သော ခန္ဓာငါးပါးကိုဟုတ်မှန်သောအားဖြင့် မြင်ခြင်းကြောင့် ဟုတ်မှန်သော ခန္ဓာငါးပါးကို ငြီးငွေ့ရန် တပ်ခြင်းကင်းရန် ချုပ်ရန် ကျင့်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် စက္ခုအမြင်ရှိသောသူတို့သည် မဇ္ဈိမပဋိပဒါဖြင့် မျက်မှောက်ပြုကုန်၏။ ဤအနက်သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်သဘောကို –
”အကြင်သူတို့သည် ဟုတ်မှန်သော ခန္ဓာငါးပါးကိုဟုတ်မှန်သောအားဖြင့် မြင်ခြင်းကြောင့် ဟုတ်မှန်သော ခန္ဓာငါးပါးကို လွန်မြောက်လျက် ဘဝတဏှာကုန်ခြင်းကြောင့် ဟုတ်မှန်သော နိဗ္ဗာန်ကို (အာရုံပြု၍) ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏။
ခန္ဓာငါးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိသော ဘဝကြီးငယ်၌ တဏှာကင်းသော ထိုရဟန်းသည် ခန္ဓာငါးပါး၏မဖြစ်ခြင်းကြောင့် တစ်ဖန် ဘဝသစ်သို့ မရောက်”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
ဒုကနိပါတ် မြန်မာပြန် ပြီး၏။